Guddoomiyaha Cusub ee Gobalka Banaadir oo la kulmay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya – Radio Daljir
Guddoomiyaha Cusub ee Gobalka Banaadir oo la kulmay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya
Janaayo 28, 2018 1:30 g 0
Amb. Olgan Bekar ayaa ugu horeyn u hambalyeeyay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Eng. Yariisow, waxaana uu xusay in uu jiro xiriir aad u wanaagsan oo ka dhaxeeya dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya, islamarkaana si gaar ah ay ula shaqeeyaan dowladda Hoose ee Muqdisho.
Waxaan u mahadcelinayaa Safiirka Turkiga Olgan Bekar oo aan ka wadahadalnay dardargelinta xiriirka Gobolka Banaadir iyo Turkiga Turkish Embassy in Mogadishu”ayuu yiri gudoomiye Yariisow.
Taliska Guud ee Ciidanka AMISOM oo ka hadlay Howlgalka kadhanka ah Alshabaab (dhegayso)